Khelkudsansar.com | नेपालले कुन ‘साग’ मा कति पदक जित्यो,कहिले कस्तो छ अवस्था ?
नेपालले कुन ‘साग’ मा कति पदक जित्यो,कहिले कस्तो छ अवस्था ?
Posted on: November 28, 2019 | views: 179
काठमाडौं । नेपालले आयोजना गर्ने १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) प्रतियोगिता नजिक-नजिक आई सकेको छ । प्रतियोगिताको लागि नेपालका विभिन्न रंगशालाहरुको निमार्ण भईरहेको छ । काठमाडौंको दशरथ रंगशाला सहित देशका अन्य रंगशालाहरुको निमार्ण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अहिले खेलाडी बन्द प्रशिक्षणमा छन्।
१३ औं साग प्रतियोगिता यहि मंसिर १५ गतेदेखि मंसिर २४ गतेसम्म (१—१० डिसेम्बर) नेपालको काठमाडौं, पोखरा र जनकपुरमा हुँदैछ । पछिल्ला प्रदर्शनलाई हेर्दा नेपाल मार्सलआर्ट, भलिबल लगायतका खेलहरुमा बलियो देखिन्छ। यसअघि भारतको सिलोङ र गुवाहटीमा भएको सागमा नेपालले ३ स्वर्णमा चित्त बुझाउनु पर्ने कारण कराते पनि थियो।
त्यस्तै नेपालले भर्खरै बंगलादेशमा सम्पन्न सेन्ट्रल जोन वुमन्स भलिबलमा स्वर्ण पदक हात परेको छ । स्तरीय टिमलाई पछि पारेको महिला भलिबलले भारत र श्रीलंकालाई हराउन सके स्वर्णको प्रवल सम्भावना देखिन्छ।
यो समेत नेपालमा भएको यो तेस्रो साग प्रतियोगिता हो । यो भन्दा पहिले सन् १९८४ मा साग प्रतियोगिताको पहिलो संकरण नेपालमा नै भएको थियो । त्यस्तै नेपालमा भएको दोस्रो तथा आठौं साग प्रतियोगिता सन् १९९९ मा भएको थियो ।
हालसम्म विभिन्न समयमा विभिन्न देशमा भएका १२ वटा साग प्रतियोगितामा नेपालले ६९ वटा स्वर्ण, १२७ वटा रजत र २७७ वटा काश्य पदक जितेको छ ।
नेपालले कुन सागमा कति पदक जित्यो ?
पहिलो साग प्रतियोगिता (नेपाल, सन् १९८४)
नेपालको काठमाडौंमा भएको पहिलो साग प्रतियोगितामा नेपालले ४ वटा स्वर्ण, १२ वटा रजत र ८ वटा काश्य पदक जित्दै सातवटा देशमा चौंथो स्थान प्राप्त गरेको थियो ।
दोस्रो साग प्रतियोगिता (बङ्गलादेश, सन् १९८५)
बङ्गलादेशको ढाकामा भएको दोस्रो साग प्रतियोगितामा नेपालले १ स्वर्ण, ९ रजत र २२ काश्य पदक जित्दै ७ वटा देशमा पाँचौं स्थान हात पारेको थियो।
तेस्रो साग प्रतियोगिता (भारत, सन् १९८७)
भारतको कोलकतामा भएको तेस्रो साग प्रतियोगितामा नेपालले २ स्वर्ण, ७ रजत र ३३ काश्य पदक जित्दै ७ वटा देशमा चौथो स्थान हात पारेको थियो।
चौंथो साग प्रतियोगिता (पाकिस्तान, सन् १९८९)
पाकिस्तानको इस्लामावादमा भएको चौंथो साग प्रतियोगितामा नेपालले १ स्वर्ण, १४ रजत र २५ काश्य पदक जित्दै ७ वटा देशमा चौंथो स्थान हात पारेको थियो।
पाँचौं साग प्रतियोगिता (श्रीलंका, सन् १९९१)
श्रीलंकाको कोलम्बोमा भएको पाँचौं साग प्रतियोगितामा नेपालले २ स्वर्ण, ८ रजत र ३० काश्य पदक जित्दै ७ वटा देशमा चौंथो स्थान हात पारेको थियो।
छैटौं साग प्रतिायोगिता (बङ्गलादेश, सन् १९९३)
बङ्गलादेशको ढाकामा भएको छैटौं साग प्रतियोगितामा नेपालले १ स्वर्ण, ६ रजत र १५ काश्य पदक जित्दै ७ वटा देशमा पाँचौँ स्थान हात पारेको थियो।
सातौँ साग प्रतियोगिता (भारत, सन् १९९५)
भारतको सद्रासमा भएको सातौं साग प्रतियोगितामा नेपालले ४ स्वर्ण, ८ रजत र १६ काश्य पदक जित्दै ७ वटा देशमा पाँचौँ स्थान हात पारेको थियो।
आठौँ साग प्रतियोगिता (नेपाल, सन् १९९९)
नेपालको काठमाडौंमा भएको आठौँ साग प्रतिोगिता नेपालको दृष्टिकोणले हालसम्मकै सबैभन्दा सफल र राम्रो मानिन्छ । उक्त प्रतियोगितामा नेपालले ३१ स्वर्ण, १० रजत र २४ काश्य पदक जित्दै ७ वटा देशमा दोस्रो स्थान हात पारेको थियो।
नवौँ साग प्रतियोगिता (पाकिस्तान, सन् २००४)
पाकिस्तानको इस्लामावादमा भएको नवौँ साग प्रतियोगितामा नेपालले ७ स्वर्ण, ६ रजत र १९ काश्य पदक जित्दै ८ वटा देशमा चौथो स्थान हात पारेको थियो।
दशौँ साग प्रतियोगिता (श्रीलंका, सन् २००६)
श्रीलंकामा भएको दशौँ साग प्रतियोगितामा नेपालले ५ स्वर्ण, १५ रजत र ३१ काश्य पदक जित्दै ८ वटा देशमा चौंथो स्थान हात पारेको थियो।
एघारौँ साग प्रतियोगिता (बङ्गलादेश, सन् २०१०)
बङ्गलादेशको ढाकामा भएको एघारौँ साग प्रतियोगितामा नेपालले ८ स्वर्ण, ९ रजत र २० काश्य पदक जित्दै ८ वटा देशमा पाँचौं स्थान हात पारेको थियो।
बाह्रौँ साग प्रतियोगिता (भारत, सन् २०१६)
भारतको गोहाटी र सिलोङ्गमा भएको बाह्रौँ साग प्रतियोगितामा नेपालले ३ स्वर्ण, २३ रजत र ३४ काश्य पदक जित्दै ८ वटा देशमा छैटौँ स्थान हात पारेको थियो।